Inkukhu ehovini ngeetapile kunye nama-mushroom - iresiphi
Inkukhu, iitapile, amakhowa-ukubhaka ehovini, ayisosi sidlo esihle? Iresiphi yokupheka ilula kwaye ayizukuthatha ixesha elininzi, kwaye emva kwenkukhu ebhakaweyo, uya kuba nembonakalo elungileyo kuphela!
inkukhu 1 kg 400 g;
fowuni I-300 g;
itswele 2 iiPC;
ityuwa, ezinye iziqholo ngohlobo lwakho;
Ukupheka inkukhu ebhakiweyo ehovini:
1. Lungisa intaka njengesiqhelo: yibambe emlilweni, yikhulule ezibilinini, uyihlambe, uyomise ngee napkin.
2. Inyathelo lokuqala leresiphi kukurabha inkukhu ngaphezulu nangaphakathi ngetyuwa, ipepile, iturmeric kunye nezinye iziqholo. Hlikihla ityuwa eninzi. Shiya inkukhu inyibilike ubuncinci iiyure ezi-2. Ngeli xesha, ijusi iya kubonakala.
3. Emva koko inkukhu kufuneka ifakwe kwifenitshala kude kube nsundu ngegolide kwioyile eshushu eshushu eshushu.
4. Emva koko, ngokwendlela yokupheka yenkuku ehovini, lungiselela amakhowa: hlamba ngebrashi kwaye usike kwiilayi ezinkulu.
5. Qhotsa nje itswele elinqunqiweyo kwioyile yemifuno, emva koko dibanisa amakhowa kwaye uncume de ulwelo luphume.
6. Chuba uze usike iitapile zibe ngamacwecwe amakhulu, yongeza ityuwa, ipepile kunye nefry kancinci kwi-skillet eshushu kwioyile yemifuno. Siqhubela phambili kwisinyathelo esilandelayo kwiresiphi yokubhaka inkukhu ehovini.
7. Hlanganisa iifatata kunye nama-mushroom.
8. Gcwalisa inkukhu ngokuzaliswa kwaye uyibeke kwimikhono yokubhaka. Beka konke ukuzaliswa ecaleni kwayo. Bopha umkhono kumacala omabini kunye nendawo kwi-oveni.
9. Qhotsa inkukhu ehovini de kuvele incindi ecacileyo. Sikhetha ixesha ngokusekwe kubunzima benkukhu: 1 kg yobunzima-iyure e-1.
Ke, sipheka inkukhu ehovini ngeyure enye kunye nemizuzu engama-1.
Inkukhu ehovini ngeetapile kunye nama-mushroom ilungile, ungayifaka kwisitya.
Namhlanje ufunde iresiphi yokuba kulula kangakanani ukupheka inkuku ehovini ngeetapile kunye nama-mushroom.
Indlela yokubhaka inkukhu ehovini kwi-foil: inyathelo ngenyathelo leresiphi
ILebhanon yeLeglic yenkukhu yeRusi
Inkukhu enencasa kunye nejusi kwimicrowave: iresiphi
Kubushushu obungakanani ubhaka inkukhu ehovini iphela kunye namaqhezu
Edlulileyo Umhla oyimfama: indlela yokuziphatha?
Okulandelayo Ngaba iimagnethi zokonga amafutha yinkohliso?
Imibuzo ye-61 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,756.